विगत होइन भविष्य हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ : अध्यक्ष जलान :: बलिराम यादव :: विगत होइन भविष्य हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ : अध्यक्ष जलान
कुनै पनि लगानीको प्रतिफलमा त्यस मुलुकको अर्थ–प्रणालीको स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, लगानीको वातावरण, बजारको अवस्था लगायत धेरै कुराको प्रभाव रहने गर्छ, तर सामान्यतः आफूले लगानी गरेको कम्पनी नाफामा गयो भने त्यसले प्रतिफल दिने र घाटामा गयो भने नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त कम्पनीको गुडविल पनि हुन्छ, जसको मूल्य सहज मापन गर्न नसकिने बताउछन वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघ शेयर बजार समिति पर्साका अध्यक्ष मुरली जलान ।
विना श्रम, विना उद्यमशीलता पूँजीको परिचालनबाट रातारात धनी हुने सपना भनेको जुवाडेको सपना हो । यदि जुवाडेको मानसिकता राखेर लगानी गर्ने हो भने सधैं जितिन्छ भन्ने हुन्न, हार्न र गुमाउन पनि तयार हुनुपर्छ । सूचकलाई जतिसुकै हेरे पनि अन्तिममा लगानी कम्पनीमै गर्ने हो । तर सूचक त्यतिकै बनाएको होइन । सूचक समग्र सेयर बजारको प्रस्तुती हेर्न बनाइएको हो ।
बजारमा दुई सयभन्दा धेरै कम्पनी छन् । एउटा कम्पनी हेर्नु अगाडि समग्र सेयर बजारको अवस्था के छ भनेर हेर्नका लागि सूचक हेर्नुपर्छ । नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा पनि सूचकलाई नै विश्लेषण गरिन्छ । यही एकाधिकार दलाल पूँजीवादी अर्थ–प्रणाली कायम रहिरहेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, लगानी, रोजगारी, वस्तुको मूल्य र समग्र मानवीय अस्तित्वमा नै यस प्रकृतिको भन्दा झनै ठूलो संकट आउने निश्चित रहेको जलानले ठम्याई रहेको छ । स्वच्छ व्यावसायिक संस्कृतिको निर्माण, प्रभावकारी राज्य नियमन प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रविधिमा आधारित तथ्यांक प्रणाली, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनको शासन, स्वच्छ राजनीतिक प्रणाली र प्रभावकारी प्रशासन मार्फत नेपालमा सुशासन र विकासको जग निर्माण गर्न सकिने जलान बताउछन । आजको अंकमा बर्तमान समयमा नेपालमा शेयर बजारको अवस्था र भबिष्यमा हुन सक्ने प्रभावको बारेमा वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघ शेयर बजार समिति पर्साका अध्यक्ष मुरली जलानसंग मध्य नेपालको लागी गरिएकोे कुराकानी ।
१) बर्तमान सयममा नेपालमा शेयर बजारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले शेयर बजारको अवस्था एकदमै नाजुक छ । अर्काे हिसाबले हेर्ने हो भने अवसर पनि छ । शेयर बजारमा अहिले नयाँ मान्छे छिर्याे भने भोलीको दिनमा राम्रो हुन्छ । विगत होइन भविष्य हेरेर शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ
२) तरलता अभावले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
शेयर बजारमा भएको प्रभाव नै तरलताको हो । शेयर बजारमा मात्रै नभई सबै व्यापारमा तरलताले प्रभाव पारेको छ । शेयर बजारमा चारबारामा जुन बन्देज लगाईयो त्यसको प्रभावले पर्दै पर्दै ३२ सयको मार्केट आएर अहिले २२ सयमा नेप्से चलिरहेको छ । भन्नाले तरलताको प्रभावले मान्छेले शेयरमा लगाउने पुँजी आधा भईसकेको छ ।
३) यसको समाधान के हुन सक्छ ?
राष्ट्र बैंकको राम्रो नीतिले मात्रै समस्या समाधान हुने हो । मान्नुस् एक हजार करोडको क्रण छ, त्यसलाई १२ करोडमा झार्नुछ भने के गर्नुहुन्छ ? सामान बेच्नु हुन्छ ।
४) शेयर बजारको खरिद बिक्रिले आम जनतालाई के फाईदा हुन्छ ?
शेयर बजारले आम जनतालाई त फाईदा गरेकै छ । संगसंगै राज्यलाई पनि फाईदा गरेको छ । फाईदा नगरिकन शेयर बजार खुल्दैन् । केही नगरि आज आईपिओ (क्ष्एइ) भर्ने मान्छेलाई सालको २÷३ लाख रुपैया आउँछ । एउटा परिवारमा ५ जना छ भने एक÷दुई जनालाई नपर्ला, अरुलाई पर्याे भने दिनका दिन आईपिओ (क्ष्एइ) आएको हुन्छ । जसले आम जनतालाई राम्रो फाईदा छ ।
५) आम जनताले सजिलै बुझ्ने भाषामा शेयर बजार कसरी खरिद बिक्रि हुन्छ ? बताईदिनुस् न ?
आजभोली मोबाईलमा सबै कुरा आईसकेको छ । एउटा क्लिकमा खरिद हुन्छ, अर्काे क्लिकमा बिक्रि हुन्छ । पहिलाको जस्तो ढिलो प्रकृया रहेको छैन् ।तर मान्छे अलिकति पढेकै हुनुपर्छ । पहिला हाम्रोतिर पढेलेखेका कमै मान्छे थिए, मोबाईलको पनि जमाना थिएन । त्यसले गर्दा अलिकति अफ्ठ्यारो थियो । तर अहिले टेक्नोलोजी यति नफास्ट भईसकेको छ कि क्लिक गर्ने वितिकै खरिद बिक्रि गर्न सकिन्छ ।
६) शेयर बजार खरिद बिक्रि प्रकृया पहिले र अहिलेमा के फरक छ ?
पहिला धेरै झन्झटिलो थियो । कागज मिलाई गएर बोली लगाउनु पथ्र्याे, ड्यास बोर्डमा यतिमा किन्छु उतिमा किन्छु भन्दै । तर अहिले मोबाईल वा कम्पयुटरमा यतिमा खरिद गर्छु भन्ने बोली लगाउन सकिन्छ । दिने मान्छेलाई ठिक लाग्यो भने शेयर दिई दिईदिन्छ । पहिले यो सब थिएन् । उतिबेला त दलालकै भरमा बस्नु पथ्र्याे । उसले जे भन्थ्यो हुन्थ्यो । तर आज त एकदमै पारदर्शि छ । तसर्थः अहिलेको टेक्नोलोजी नै सजिलो छ ।
७) अहिलेको बजेटमा शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
सबै भन्दा दुःख लाग्यो कुरा यही छ कि यसपालिको बजेटमा सरकारले शेयर बजारलाई छोएकै छैन् । अलिकति पनि शेयर बजारको बारेमा सरकारले पोजेटिभ सोचेको भए शेयर बजार २ हजार/२२ सयको ठाउँ २४/२५ सय हुन्थ्यो । तर कुरै गरेको छैन् ।
८) शेयर बजारम सकारात्मक प्रभाव पार्न सरकारले कस्तो निति ल्याउनु पर्छ ?
१४ महिना अगाडी भएको नीति त ठिकै थियो नि । तर यो भन्दा बढि गर्न सक्नु हुन्न भनेर बाँधियो नि त्यो ठिक भएन् । शेयर बजारले देशको आर्थिक स्थिति दर्साउछ । भारतमा ६५ हजारसम्म नेप्से चलिरहेको छ, तर हामी कहाँ २ हजार/२२ सय छ । यो त धेरै फरक छ नि । यसले त देशको अवस्था कस्तो छ भने दर्साउछ नि ।
९) अहिले भईरहेको दिनहु विधृत ट्रिपिङ्ग समस्याले उद्योग व्यवसाय संचालनमा कस्तो समस्या भएको छ ?
धेरै पिडामा छौं । ६/७ बर्ष अगाडी जुन लोड सेटिङ्ग थियो, त्यही अवस्था अहिलेको छ । छिन छिनमा लाईन आउने जाने । हामीले कुन कुन यन्त्र लगाउने, कुन कुन नलगाउने ? सबै यन्त्र फेल भईरहेको छ । लाईन काट्ने समस्याले मोटर जलिरहेको छ, प्यालन जलिरहेको छ । अचानक लाईन कट्ने, एकैचोटी भोल्टेज हाई भईहाल्ने, त्यसले गर्दा मेसिन जलिरहेको छ । यसले त हाम्रो उत्पादन पनि ६० प्रतिशत घटिसकेको छ । यो समस्याले त बिस्तारै अरु बेरोजगार पनि बढलान् । सरकारले हामीलाई जे कुराको सहुलियत दिईरहेको छ नि, त्यो सबैमा बेईमानी गरिरहेको छ । प्राईबेटसंग लिने तर दिने बेलामा यस्तो गर्ने ? आज त्यही विधुत प्राईबेटले दिएको भए भोल्टेज अलिकति कम हुने वितिकै जरिवाना हुन्थ्यो । यहाँ खै कसलाई बोल्न जाने ? हामी त अहिले धेरै मर्कामा छौं ।
१०) नेपाल सरकारले भारतलाई बिधुत बेचेको छ ? यसबारे यहाँ के भन्नु हुन्छ ?
यो त सकारात्मक कुरा हो । बेचेको छ । तर यही क्वालिटिको बेचिरहेको छ भने कति दिन बेच्ला ? बिधुतको क्वालिटि राम्रो हुनुपर्याे नि ! भोल्टेज, एम्पियर सही आउनु पर्याे । त्यस्तो दियो भने देशको लागि राम्रो कुरा हो । हाईड्रोपावर भएको देश हो हाम्रो । विश्वको दोस्रो स्थान । ब्राजिल पछि हाम्रै देश आउँछ । तर खै हाम्रै देशलाई पुगिरहेको छैन, अनि विदेशमा बेच्छु भन्छ ।
११) अन्त्यमा, शेयर बजारको कारोबार गर्ने ब्यतिmलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?
शेयर बजारमा कहिले पनि नडराउनुस् । शेयर बजार कुनै बेला पनि नोक्सान गर्दैनन् । फाईदा दिएर नै जान्छ । कुनै सामान मैले किनेको छु भने त्यसको मुल्य नआउनजेल म बिक्रि गर्दैन् । त्यो त मेरो स्टोक हो नि । विश्वास राख्नुपर्छ, शेयर बजारमा कहिल्यै घाटा हुँदैन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३१, २०७९ ११:५०